जान्नुहोस ! कुन राशी भएका व्यक्तिलाई के लगाउदा राम्रो हुन्छ त !Samachar Pati
जान्नुहोस ! कुन राशी भएका व्यक्तिलाई के लगाउदा राम्रो हुन्छ त !
अहिलेको २१ औ सताब्दिमा आएर पनि जन्मकुण्डलिमा विश्वाश गर्छन् र भन्नेको जमात पनि ठुलै छ । तर विश्वाश गर्ने जमातमा नि कुनै कमी भने छैन । कैयौ मानिस आफ्नो दैनी राशिफल अनुसार दैनिकी पनि बिताउने गर्छन् । कैयौ मानिस आफ्नो भाग्य थाहा पाउनको लागी हात ज्योतिषलाई देखाउनका निमित्त लामै लर्को पनि लागेको देखेका छौ ।
घर बनाउदा बास्तु र आफ्नो जिवनको फल थाहा पाउन जन्मकुण्डली हेराउने र सोही अनुरुप आफु चल्ने पनि गर्छन् । ग्रह अनुरुप रत्न लगाउने जस्ता काम गर्दछन् ।
मेष राशी हुनेहारुले हिराको रत्न लगाउनु पर्ने हुन्छ । हिराको रत्न लगाउनाले तपाई भाग्य शति बिस्तारै बढ्दै जाने छ । यो रत्न लगाउनाले मानिसको भाग्यमा परिर्वतन भई मानिसलाई आफ्नो सकारात्मक प्रभावमा पार्न सकिने छ । त्यसैगरि वृष राशी हुनेहारुले भने पन्ना नाम गरेको रत्न लगाउनु पर्ने हुन्छ । वृष राशी लाई पृथ्वीको तत्व मानिन्छ । यो रत्न लगाउँदा मनमा नकारात्मक कुरा पैदा हुन पाउदैन् ।अनी मिथुन राशी हुने व्यक्तिले मोति रत्न लगाउनु पर्ने हुन्छ । यस राशी भएका व्यक्तिमा आथिर्क समस्या छ भने, यो रत्नले आर्थिक स्तर बलियो बनाउँदछ
कर्कट राशी भएका मानिसहरुले माणिक्य रत्न लगाउनुपर्ने छ । यस रत्न लगाउनाले मानिसको स्वभाव, सम्बन्ध आर्थिक स्तर बलियो बनाउँछ । त्यसैगरि सिंह राशी हुने मानिसहरुले पिडामिड नामको रत्न लगाउनु फाइदाजनक मानिन्छ । यो रत्न लगाउनाले मानिसको क्रोध हट्देै जान्छ भने , बिग्रिएका सम्बन्ध पनि बलियो हुने छ । भने कन्या राशी हुने मानिसले निलम नाम गरेको रत्न लगाउने पर्ने हुन्छ । यस रत्नले मानिसलाई नयाँ दिशा तर्फ लग्ने काम गर्दछ ।भने तुला राशी हुनेहरुले मानिसले ओपल नामको रत्न लगाउनु उत्तम मानिन्छ , यस रत्न लगाउनाले मानिस आर्कषक र राम्रो बन्ने र शुभचिन्तक बन्ने सकिने छ ।
वृश्चिक राशी हुने व्यक्तिले टोपाज काम गरेको रत्न लगाउनु पर्छ । यस रत्न लगाउनाले स्वाथ्य सम्बन्धी समस्या हटेर जाने छ भने भावनात्मक कुरा खेलाउने मानिसहरुमा परिर्वतन परिचर्वन हुने छन् ।हो भने धनु राशी भएका मानिसले फिरोजा रत्न लगाउनु पर्छ । यो रत्नले मानिसको स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी रोग भए यो रत्न लगाउदा छिटो नै स्वास्थ्य समस्या हटेर जाने ज्योतिषहरु बताउदछन् ।
मकर राशी हुने मानिसले गार्नेट नाम गरेको रत्न लगाउनु पर्छ । यस रत्नले मानिसलाई शक्ति मिल्ने र नकारात्मक कुरा मनमा आउँदैन ।त्यसैगरी कुम्भ राशी राशी भएकाले कलेटा नामको रत्न लगाउने गर्नाले मानिसको जीवन सन्तुलित हुने छ । भने मीन राशी हुनेले एक्वामरीन नामको रत्न लगाउनु पर्छ । यो राशिको प्रतिक माछा हो । यसले मानिसको प्रकृितलाई नियन्त्रण गरी सुखी बनाउँदछ ।
कुपोषित एकै परिवारका दुई बालकलाई पोर्चुगल नेपालीको संस्थालेआर्थिक सहयोग
अष्ट्रेलियामा नेपाली कलगर्ल, घरमै गएर दिन्छन् सेवा
शंखेकिराबाट तरकारी जोगाउन कृषकलाई समस्या